ရနှေးငှေ့ | November 2019
အုပျစုမြားသငျသညျဘုံအကျိုးစီးပွားရှိသည်သောအသုံးပြုသူများကိုရန်မက်လုံးပေးပေါင်းစပ်ဖို့ခွင့်ပြုပါ။ ဥပမာအားဖြင့်, တူညီသောမြို့အတွင်းအသက်ရှင်လျက်, Dota2ဂိမ်းကိုကစားသူအပေါင်းတို့သည်အသုံးပြုသူများကိုအတူတကွလာနိုင်ပါတယ်။ အုပ်စုများလည်းထိုကဲ့သို့သောရုပ်ရှင်တွေကိုကြည့်အဖြစ်အချို့သောဘုံအကျိုးစီးပွားရှိသည်သူတွေကိုဆက်သွယ်နိုင်သည်။ သငျသညျအုပ်စုတစ်စုသူမတိကျတဲ့အမည်အားထည့်သွင်းဖို့လိုအပ်တဲ့မက်လုံးပေးဖန်တီးအခါ။
စနစ်အတွက်အသုံးပြုသူတစ်ဦးရင်ဆိုင်ရရသောဘုံပြဿနာများ၏တဦးတည်းကိုအခြားသော့ပွင့်သည်။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သငျသညျကိုယျတျောနှငျ့စကားများရန်ဖြစ်ပြီးနောက်အခြားအသုံးပြုသူရေနွေးငွေ့စာမျက်နှာပိတ်ဆို့, ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့ဆက်ဆံရေးဟာအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှထူထောင်, သင်မိတ်ဆွေတစ်ဦးအဖြစ်ကပြန်ဆောင်ကြဉ်းချင်သည်။ အတော်များများကရေနွေးငွေ့သည်အသုံးပြုသူများသည်အခြားသော့ဖွင့်လုပ်ဖို့ဘယ်လိုသိကြပါဘူး။
Periodic password ကိုပြောင်းလဲမှုများကိုမည်သည့်အကောင့်လုံခြုံရေးတိုးတက်ကောင်းမွန်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာစကားဝှက်ဒေတာဘေ့စဖို့တစ်ခါတစ်ရံတိုက်ခိုက်ဝင်ရောက်ခွင့်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကြောင့်ဖြစ်ပါသည်, ထို့နောက်သူကမဆိုအကောင့်ထဲသို့မဝင်ရနှင့်၎င်းတို့၏ပင်ပန်းစေရန်ခက်ခဲလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ ဥပမာအားဖြင့်, လူမှုကွန်ယက်များနှင့်ရေနွေးငွေ့အတွက် - သင်ကွဲပြားခြားနားသောနေရာတူညီသော password ကိုအသုံးပြုတယ်ဆိုရင်စကားဝှက်ကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်အထူးသဖြင့်သက်ဆိုင်ရာ။
Stim မှဖုန်းချည်နှောင် Remove
ရေနွေးငွေ့ယခုသင့်အကောင့်ကိုကာကွယ်ရန်နည်းလမ်းများစွာပေးထားပါတယ်။ အဆိုပါမက်လုံးပေးဖို့စံရဲ့ login နဲ့ password များအပြင်နောက်ထပ်စည်းနှောင်ကွန်ပျူတာဟာ့ဒ်ဝဲရှိသေး၏။ သင်သည်အခြားကွန်ပျူတာအသုံးပြုသူအနေဖြင့်ရေနွေးငွေ့အကောင့်ကိုသွားရန်ကြိုးစားသောအခါကြောင့်ဤသူသည်ဤပရိုဖိုင်း၏ပိုင်ရှင်ရှိမရှိအတည်ပြုဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
အဆိုပါမက်လုံးပေးဂိမ်းငွေပေးချေမှုနှင့် ပြန်. ဖြည့်အများအပြားကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်ဖြစ်ပါသည်။ အကယ်. အလုံးစုံတို့ကိုရှေ့တော်၌ခရက်ဒစ်ကဒ်အားဖြင့်ဝယ်ယူရန်ကန့်သတ်ထားပေမယ့်ယခုသင်အကြွေးကဒ်များကို support လုနီးပါးမည်သည့်ငွေတောင်းခံသည့်စနစ်ကိုသုံးနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်, ရေနွေးငွေ့အပေါ်ဂိမ်းကိုဝယ်ခြင်းငှါ, သင် WebMoney နှင့် QIWI ကဲ့သို့သောလူကြိုက်များအီလက်ထရောနစ်ငွေပေးချေမှုစနစ်အတွက်သုံးနိုင်သည်။
, ဂိမ်းများဝယ်ယူရန်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူ chat, နောက်ဆုံးပေါ်သတင်းရနှင့်, သင်တန်း, သငျသညျမှတျပုံတငျဖို့လိုအပ်ပါတယ်သင်အကြိုက်ဆုံးဂိမ်းကစား။ ရန်မက်လုံးပေးဖို့ အသစ်တစ်ခုကိုရေနွေးငွေ့အကောင့် Create သင်ယခင်ကမှတ်ပုံတင်ကြပြီမဟုတ်မှသာလျှင်လိုအပ်သည်။ သငျသညျပြီးသားပရိုဖိုင်းကိုဖန်တီးကြလျှင်, ပေါ်မှာဖြစ်ကြောင်းသမျှသောဂိမ်းများကိုသာသူနှင့်အတူမရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်။
ရေနွေးငွေ့အပေါ် passwords များကိုပြန်လည်သက်သာ
ရေနွေးငွေ့ - သင်သည်များစွာသောအသုံးပြုသူများအတွက်အထူး features တွေဝင်ရောက်ဖို့ခွင့်ပြုတဲ့စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။ အသုံးပြုသူအမည် + password ကိုတစည်းကို အသုံးပြု. အသုံးပြုသူကိုသတ်မှတ်နိုင်ရန်အတွက်။ သင်သည်သင်၏အကောင့်ထဲသို့ log လိုက်တဲ့အခါအသုံးပြုသူဒီပေါင်းစပ်ထည့်သွင်းထားရန်လိုအပ်ပါသည်။ ရဲ့ login များသောအားဖြင့်အဘယ်သူမျှမကပြဿနာဖြစ်တယ်ဆိုရင်, စကားဝှက်နှင့်အတူပြဿနာကို - ကတော်တော်လေးဘုံပါပဲ။
ရေနွေးငွေ့ update ကို
ပဲမဆိုတခြားဆော့ဗ်ဝဲထုတ်ကုန်များကဲ့သို့ရေနွေးငွေ့, သည် Periodic updates များကိုလိုအပ်သည်။ တစ်ခုချင်းစီကို update ကိုအတူကတိုးတက်စေူခင်း, developer များ bug တွေကို fix နှင့်အသစ် features တွေထည့်ပါ။ ပျမ်းမျှရေနွေးငွေ့ update ကိုတစ်ဦးချင်းစီက start မှာအလိုအလျှောက်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ သို့သော် update ကိုအတူပြဿနာတစ်ခုရှိပေမည်။
ရေနွေးငွေ့ - ကအကောင်းဆုံးဂိမ်းဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်သင်အွန်လိုင်းဂိမ်းတွင်မိတ်ဆွေများနှင့်အခြားအကြောင်းအရာများနှင့်အတူဆော့ကစားခြင်းနှင့် chat ပေးနိုင်ပါတယ်။ သို့သော်သစ်ကိုအသုံးပြုသူများသည်ဤအစီအစဉ်၏ installation စဉ်အတွင်းပြီးသားပြဿနာများကြုံတွေ့ရလိမ့်မည်။ ရေနွေးငွေ့သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်မတပ်ဆင်ရသေးလျှင်အဘယ်အရာကို - ကအကြောင်းပေါ်မှာဖတ်ပါ။ ရေနွေးငွေ့အတန်ငယ် installation လုပ်ငန်းစဉ်ကိုရပ်တန့်နိုင်သည်ကိုအကြောင်းပြချက်။
ရေနွေးငွေ့အကောင့် hacked ။ အဘယ်သို့ပြုသနည်း
တောင်မှအများဆုံးစုံလင်သော system ကိုလက်ကမြင်းဆန့်ကျင်ကာကွယ်ပေး, ဒါကြောင့်ရေနွေးငွေ့အောင်မြင်တဲ့ဟက်ကာတိုက်ခိုက်မှုမှဘာသာရပ်ဖြစ်အံ့သောငှါဖြစ်နိုင်သည်မဟုတ်ပါ။ ဖောက်ထွင်းများ၏တကယ်တော့၏ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုကွဲပြားခြားနားသောကွညျ့ရှုနိုငျသညျ။ အဆိုပါတိုက်ခိုက်သင့်အီးမေးလ်ဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးဆိုရငျ, အရှိဆုံးဖွယ်ရှိ, သင်သည်သင်၏အကောင့်ထဲသို့ log နိုင်ပါလိမ့်မည်, ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့ပိုက်ဆံအိတ်ကနေပိုက်ဆံအမျိုးမျိုးသောဂိမ်းသုံးစွဲထားပြီးကွောငျးတှေ့နိုငျသညျ။
အင်တာနက်ကွန်နက်ရှင် browser များအလုပ်မလုပ်ပေမယ့် client ကိုချိတ်ဆက်မဖြစ်ကြောင်းရေနွေးငွေ့စာမျက်နှာများနှင့်အစီရင်ခံစာများကို load ပါဘူး, အခါမကြာခဏရေနွေးငွေ့အသုံးပြုသူများသည်ပြဿနာတစ်ခုကြုံတွေ့။ မကြာခဏထိုကဲ့သို့သောမှားယွင်းမှုတစ်ခု client ကို update ကိုအပြီးတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ဤဆောင်းပါး၌ကျွန်ုပ်တို့သည်ပြဿနာနှင့်မည်သို့သူတို့ကိုပြုပြင်ဖို့၏အကြောင်းတရားများကိုကြည့်ပါလိမ့်မယ်။
ရေနွေးငွေ့ဤဝန်ဆောင်မှုနီးပါးမဆိုအသုံးပြုသူကျေနပ်အောင်နိုငျသောအင်္ဂါရပ်များတို့သည်ကြီးစွာသောအစုံရှိပါတယ်။ အထွေထွေခြုံငုံသုံးသပ်ချက်အပေါ် screenshots များထုတ်ပေးပုံမှန်အတိုင်းဂိမ်းဝယ်ယူခြင်းနှင့်အပြေး၏ functions များ, ဆက်သွယ်ရေး, တဘက်, မက်လုံးပေးသည်အခြားဖြစ်နိုင်ခြေများတဲ့အရေအတွက်ကတင်ပြသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, သင်စနစ်၏အခြားအသုံးပြုသူများနှင့်သင်၏စာရင်းပစ္စည်းများကိုမျှဝေနိုင်ပါသည်။
အချို့သောအသုံးပြုသူများသည်သင့်အကောင့်၏ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှု၏ဒီဂရီတိုးပွါးသောမိုဘိုင်း Authenticator ရေနွေးငွေ့ရေနွေးငွေ့စောင့်တပ်ဖွဲ့, ကိုအသုံးပြုပါ။ ရေနွေးငွေ့စောင့်တပ်သင့်ဖုန်းတစ်ဦးတင်းကျပ်စွာနားချင်းဆက်မှီရေနွေးငွေ့အကောင့်ဖြစ်ပါသည်, သို့သော်သင်ဒီနံပါတ်ကိုသင့်အကောင့်မှပူးတွဲနေစဉ်ဖုန်းနံပါတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်အဘယ်မှာရှိအခွအေနသို့ရနိုငျပါ။
ယနေ့အင်တာနက်မှတဆင့်ဂိမ်း, ရုပ်ရှင်နှင့်ဂီတ၏ဝယ်ယူမှုတွဲအသုံးပြုသူတစ်ဦးတိုးပွားလာ။ တစ်ဦး drive ကိုများအတွက်စတိုးဆိုင်သွားမတူဘဲ, အင်တာနက်ကတဆင့်ဝယ်ယူအချိန်ကယ်တင်တော်မူ၏။ သငျသညျပင်အိပ်ရာချွတ်တက်ရဖို့မရှိကြပါဘူး။ ရုံခလုတ်၏စုံတွဲတစ်တွဲနှိပ်, သင်သင်အကြိုက်ဆုံးဂိမ်းသို့မဟုတ်ရုပ်ရှင်ကိုခံစားနိုင်ပါတယ်။
ရေနွေးငွေ့စောင့်တပ်ဖွဲ့ရေနွေးငွေ့အကောင့်များကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးမြှင့်တင်ရန်လိုအပ်နေပါသည်။ ပုံမှန်ဂျခုနှစ်, နိမိတ်လက္ခဏာ-in ကိုသင်ရုံသာ username နှင့် password ကိုရိုက်ထည့်ရန်ရှိသည်။ သင်ရေနွေးငွေ့ရိုက်ထည့်ရန်, ထို့နောက်ရေနွေးငွေ့စောင့်တပ်ဖွဲ့သုံးနေတယ်ဆိုလျှင်ထိုကိစ္စတွင်, ရေနွေးငွေ့စောင့်တပ်ဖွဲ့အတွက်သင့်မိုဘိုင်းစက်ပစ္စည်းတွင်ထုတ်လုပ်ပြီးသောအတည်ပြုရန်ကုဒ်ရိုက်ထည့်ရပါလိမ့်မယ်။
Stim ကမ္ဘာတဝှမ်းကလူများစွာကအသုံးပြု။ အဆိုပါဝန်ဆောင်မှုကိုသင်နေထိုင်ရာဒေသပေါ် မူတည်. တိကျသော setting များကိုသတ်မှတ်ပေးသောဘက်ပေါင်းစုံထိန်းချုပ်မှုစနစ်, ဖြစ်ပါတယ်။ ယင်းဒေသ၏ setting တွင်ထိုအစုထိုရေနွေးငွေ့စတိုးဆိုင်အဖြစ်အချို့သောဂိမ်းရရှိမှုတွင်ပြသပါလိမ့်မည်သောစျေးနှုန်းများပေါ်မူတည်သည်။
သင်သည်သင်၏ကွန်ပျူတာကနေရေနွေးငွေ့ကိုဖယ်ရှားလိုက်တဲ့အခါ, များစွာသောအသုံးပြုသူများကိုမမျှော်လင့်ဘဲကံမကောင်းနှငျ့ရငျဆိုငျကြသည် - ကွန်ပျူတာကနေအပေါငျးတို့သဂိမ်းများကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ တဖန်ငါအပေါငျးတို့သဂိမ်းများကို install လုပ်ရန်ရှိသည်နှင့်, ဂိမ်းမှတ်ဉာဏ်အနည်းငယ် terabytes ဖြစ်လျှင်ကတစ်ဦးထက်ပိုသောနေ့ရက်ယူနိုငျသညျ။ ဤပြဿနာကိုရှောင်ရှားရန်, သင်မှန်ကန်စွာသင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကနေရေနွေးငွေ့ကိုဖယ်ရှားရပါမည်။
ရေနွေးငွေ့ဟာအလွန်လုံခြုံမှုစနစ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုနေသော်လည်းအပြင်တစ်ဦးကိုတခါတရံကွန်ပျူတာနှင့်မိုဘိုင်း app နှင့်အတူစစ်မှန်ကြောင်းသက်သေပြနိုင်စွမ်း၏ဟာ့ဒ်ဝဲမှ binding, သေးဟက်ကာများအသုံးပြုသူအကောင့်မှဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိမနိုင်လည်းမရှိ။ သင့်အကောင့်သို့ logging သည့်အခါဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, အကောင့်ပိုင်ရှင်အခက်အခဲများစွာတွေ့ကြုံခံစားနိုင်ပါတယ်။
သငျသညျရေနွေးငွေ့အတွက်အကောင့်တစ်ခုဖန်တီးပြီးတာနဲ့သင်ကသင့်ရဲ့အကောင့်ကိုသက်ဝင်ရမည်ဟုသတိပေးပါလိမ့်မယ်။ သို့သော်မရတိုင်းအသုံးပြုသူအထူးသဖြင့်အတွေ့အကြုံမရှိသေးသောကြောင့်မည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကိုသိတော်မူ၏။ ထို့ကွောငျ့ကြှနျုပျတို့သညျဤဆောင်းပါးအတွက်ဤမေးခွန်းကိုမြှင့်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ တစ်ဦးရေနွေးငွေ့အကောင့်ကိုသက်ဝင်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ? ဒါကြောင့်ဘယ်လိုသင်ကန့်သတ်ဖယ်ရှားပစ်သလဲ? အလွန်ရိုးရှင်းတဲ့။ သငျသညျစတိုးဆိုင်ရေနွေးငွေ့အနည်းဆုံး $5ဖြုန်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
ရေနွေးငွေ့အသုံးပြုသူအကောင့်များ applications များ, interfaces, etc တက် setting များအတွက်လုံလောက်သောအခွင့်အလမ်းများကမ်းလှမ်း အဆိုပါရေနွေးငွေ့ဆက်တင်များဖြင့်သင်သည်သင်၏လိုအပ်ချက်များကိုကိုက်ညီဖို့ကစားလယ်ပြင်ကိုထိန်းညှိပေးနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်, သင်ကအခြားအသုံးပြုသူများမှမြင်နိုင်ပါလိမ့်မည်ကြောင်းကိုသင်၏စာမျက်နှာများအတွက်ဒီဇိုင်းကိုသတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ သင်တို့သည်လည်းရေနွေးငွေ့အတွက်ဆက်သွယ်ရေး၏ Modes သာချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်, သငျသညျရေနွေးငွေ့တစ်မှေးအိပ်ပေါ်တွင်မက်ဆေ့ခ်ျအသစ်အကြောင်းကိုအကြောင်းကြား, သို့မဟုတ်ပါကပိုပါလိမ့်မည်ဖြစ်စေမရွေးချယ်ပါ။